Author: Faeshura Moogule
Waraabe ulla lala gaadhi waa, orodna wax lagaga dhibi waa. Hurdo cagahay ka bilaabataa.
Af jooga looma adeego. Hunnu hunnu hadal maaha, himbiriirsi arag ma aha Aqoon xumo abaar ka daran qorsho xumo abaar ka daran Qof walba qumanihiisaa qoorta ugu jira.
Ama afeef hore lahow ama adkaysi danbe Naagi nimay legdaan, kama kacaan. T Gaajo gurri og. Nin xil qaaday eed qaad. Dhedo roob noqon weydey T Badhi dab ku dhufo. Cidlo ciirsi m leh.
T Billad aan boqor lahayn. Casarkii wixii kugu dhacaa cishihii lagugu caayaa. Calafkaa, nin ku rabaa baa haya. Nafsi raaga rag iyo geel baa iska leh. You are commenting using your Facebook account.
Wadaanta isha ka xumaataa, faylkay la tagtaa. Post was not sent – check your email addresses! Geesi allaahay ma xilo.
Bil-saddex reerkaagana waa kaa kaxaysaa, reer kalena kuuma geyso Naago waa u samir ama ka simir. Quud aan jirin qoryo u guro. Nin is faanshay waa ri is nuugtay. Mukulaal minankeedii joogtaa miciya aar bay leedahay. Nin abaal gala wax badan baa la arkaa ninse guda wax yar baa la arkaa. Nin daad maahmaahyk xunbo cuskey Shisheeye sheela duxa ma leh.
Dad iyo weel godanba waa la badsadaa weelka godan biyahaa ku urura Aqal libaax lafo lagam waayo. Saddex waa xarago adduunyo Hanta badni Qabiil wagaasani Hadal karnimo 6. J Dab dab ku dhufo. Cadku ceeji, xil maamhaahyo geeriba kuu dil. Nin aad kabtiisa tolaysaa, kadabkaaga jaraya Illeyn doqoni qiiq kama kacdee maahmazhyo meer meerisaa. Xoolo quudheed waa la qaataa, soor quudheedse lama qaato. Gar waa loo wada islaam Nin aan hadlin habartiisba qadisay Beeni raad ma leh.
Dooro hadey hal waddo iyo hadey toban waddo Kurug ,Kurug ma Dhaafeeyso…… Reerka meelan loo husan looma haatiyo. Magaca, magta iyo maganta. J Nin qosol baddan iyo Nin quusi maad baddan.
J Meel ma wada seexateen? Doqon nebi Muusaa habaaray Deero waa dal maddays. Layligu kasha biyihiisa ku jiruu ka didaa.
Hooyadii ka guure habar yartii kuma negaado. Maalintii intay ishaadu gaadhaa la hadlaa, habeenkiina inta gacantaadu gaadho.